ရွှေနိုင်ငံ: နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းများ၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ စီမံကိန်းများနှင့်အတူ အမြင့်ဈေးနှုန်းများမှ အိမ်ခြံမြေဈေး ထပ်မံခုန်တက်
နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းများ၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ စီမံကိန်းများနှင့်အတူ အမြင့်ဈေးနှုန်းများမှ အိမ်ခြံမြေဈေး ထပ်မံခုန်တက်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း အိမ်ခြံမြေဈေးများ တစ်စတစ်စ မြင့်တက်လာခဲ့ရာမှ အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများ ဖော်ထုတ်မည့် သတင်းများနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့၏ မြင့်တက်လာ သည့် လူဦးရေနှင့်အတူ လိုက်ပါဖြည့်ဆည်း မပေးနိုင်သည့် အိမ်ရာအဆောက်အအုံ လိုအပ်ချက်များအတွက် ပေါ်ပေါက်လာသည့် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ စီမံကိန်းများကြောင့် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်သည် ယခင်ရှိရင်းစွဲ အတက်ဈေးမှ ထပ်မံမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်က အိမ်ခြံမြေတိုက်တာ အဆောက်အအုံများ ဝယ်ယူပါက ရာခိုင်နှုန်း ၅ဝ ကျော် အခွန်ဆောင်ရသည့် စနစ်မှ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း အခွန်ဆောင်ပါက ဝင်ငွေရလမ်း ဖော်ပြစရာမလိုဘဲ ဝယ်ယူခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အတွင်းသို့ ငွေမည်းများ ဝင်ရောက် လာခဲ့ သည်ဟု သိရသည်။ ထို့အတူ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေသော ကျောက်ပွဲများ၊ သစ်မှောင်ခို၊ ဘိန်းမှောင်ခို စသည့်လုပ်ငန်းများမှ ငွေများလည်း အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အတွင်း အရင်းအနှီးများစွာ ထည့်ဝင်၍ ဝင်ရောက် လာသည့်အတွက် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းမှာ တစ်စတစ်စ ကောင်းလာခဲ့သည်။
အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသား မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိသော်လည်း နိုင်ငံသား အမည်ပေါက်နှင့် ဝယ်ယူမှုများ ရှိနေသည့်အတွက် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် မလိုအပ်ဘဲ ဈေးမြင့်တက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအရမူ ဝယ်ယူသူရော တစ်ဆင့်ခံ ဝယ်ပေးသူပါ အရေးယူ ခံရနိုင်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ တွင် Law Enforcement အားနည်းသောကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ လက်တစ်လုံးခြား ဝယ်ယူနေသည့် အတွက် အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများ တစ်စတစ်စ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း ရန်ကုန်မြို့နှင့် တစ်ဖက်ကမ်း ဒလမြို့အား ကိုရီးယားနိုင်ငံက ချစ်ကြည်ရေး အနေဖြင့် တံတားထိုးပေးမည်ဆိုသော သတင်းများကြောင့် တံတားထိုးမည့်ဧရိယာ ပတ်ဝန်းကျင်နေရာ များ ဈေးအလွန်မြင့်တက် လာခဲ့ပြီး ကြည့်မြင်တိုင်၊ ဗားကရာဘက်တွင် တံတားထိုးမည်ဟူသော သတင်း များကြောင့် ယင်းဒေသရှိ လယ်မြေများလည်း ဈေးမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“မြေအမျိုးအစားတွေကတော့ ခွဲထားတယ်။ နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ ဒလနဲ့ ကြည့်မြင်တိုင်အပြင် သန်လျင်ဘက်လည်း ပြောသံကြားတယ်။ ဒီသန်လျင်ကတော့ တံတားဟောင်းရှိတာပေါ့။ အဲဒီဘက်မှာ တံတားတစ်စင်း ထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ဖြစ်တယ်။ သန်လျင်ကတော့ သိသိသာသာ မဟုတ်ပါဘူး။ နဂိုကတည်းက တံတားရှိပြီးသားကို တံတား-၁၊ တံတား-၂ ရှိတယ်။ ၂ ဆိုတာ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းဘက်ကထိုးတာ၊ ကုလားဝဲကျေးရွာဘက်က ထိုးတာ။ အဲဒီကျတော့ ကွန်တင်နာသွားမယ့် တံတား။ ဒီဘက်ကတော့ ဘတ်စ်ကားတွေ၊ လူစီးတဲ့ယာဉ်တွေ ဖြတ်တဲ့နေရာကတော့ ဆောက်ထားတာတော့ ကြာပြီ။ အဓိကကတော့ အဲဒီနေရာနှစ်ခုပေါ့။ နောက်တစ်ခု ရွှေလင်ပန်းနဲ့ ဒဂုံမြောက်၊ အဲဒီဘက်လည်း တံတားထိုးမယ်ဆိုပြီး သတင်းထွက်တယ်။ အဲဒီဘက်မှာတော့ အကွက်မြေက သိပ်မများတော့ အဲဒီလောက်ထိ ဟော့မဖြစ်ဘူး” ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အဓိကပြဿနာက ငွေမည်းတွေကို မထိန်းချုပ်တာပဲ။ ငွေမည်းတွေကို မထိန်းချုပ်တော့ အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍထဲ ဝင်လာတယ်။ ငွေမည်းဆိုတာ အခွန်မဆောင်တိုင်းလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ-စက်မှုဇုန်တွေမှာဆို မြေကွက်တွေယူထားပြီး ခုချိန်ထိ အကောင်အထည် မဖော်သေးတဲ့သူတွေ ရှိသေးတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူနိုင်ဖို့လိုတယ်။ စက်မှုဇုန်တွေမှာ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ လောက် စက်ရုံငှားစားသူတွေ ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိ . . . . .
“ဥပမာ-ဒလဘက်မှာဆိုရင် တံတားထိုးမယ့် ချဉ်းကပ်လမ်းနဲ့ နီးတဲ့နေရာတွေဆိုရင် တော်တော်တက်တယ်။ အရင်က ၄ဝ×၆ဝ ကို သိန်း ၂ဝဝဝ ကနေ အခု သိန်း ၄ဝဝဝ ရှိတယ်။ ဒလမှာပဲ ကျန်နေရာတွေကတော့ နဂိုကထဲက တက်ပြီးသား။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်လောက်ကတည်းက တက်တယ်။ အခုတော့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက အခုအစိုးရလက်ထက်မှာ မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ နည်းနည်းငြိမ်သွားတယ်။ အခုဆိုရင် သိန်း ၃ဝ လောက်နဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ အကွက်တွေက လေးဆလောက် တက်သွားတယ်။ သိန်း ၁၄ဝ လောက် ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီ ၄ဝဝဝ လောက်ခေါ်တဲ့ နေရာတွေက အစတော့ သိန်း ၇ဝဝ လောက်ပဲရှိတယ်။ နောက်တော့ ၂ဝဝဝ၊ တံတားထိုးမယ်ဆိုတော့ ၄ဝဝဝ လောက်ဖြစ်သွားတယ်။ ကြည့်မြင်တိုင်ဘက်မြေတွေက လယ်မြေတွေများတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကဆယ်ဂဏန်းကနေ တစ်ရာဂဏန်းလောက် ဖြစ်သွားတယ်။ သူကတော့ နှစ်ဆလောက်ပဲ တက်တယ်။ ဦးစိုးသိန်းကတော့ အဲဒီနှစ်ခုလုံးကို သူတို့အစိုးရလက်ထက် မလုပ်တော့ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက ၂ဝ၁၅ မှာ လုပ်မယ်ဆိုတော့ ဒီကြားထဲမှာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီ Plan တွေက ပြီးဖို့မလွယ်ဘူး။ ရန်ကုန်မြို့ကို တိုးချဲ့မယ်ဆိုရင် ခရမ်းတို့ပါပါတယ်။ စတုရန်းမိုင်နဲ့တွက်တာ။ ခရမ်းဘက်ဆိုရင် စတုရန်းမိုင်ဘယ်လောက်၊ သန်လျင်ဘက်ဆိုရင် ဘယ်လောက်စတုရန်းမိုင်နဲ့ တွက်ခဲ့တာရှိတယ်” ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အနေအထားများအရ လူဦးရေသိပ်သည်းမှုနှင့် Demand နှင့် Supply မမျှတသည့် အနေအထားများကြောင့် ရန်ကုန်မြို့အား ထပ်မံတိုးချဲ့ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့တိုးချဲ့ရန် လျာထားချက်အရ ကြည့်မြင်တိုင် အနောက်ဘက် ၂၆ စတုရန်းမိုင်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် ၃၈ စတုရန်းမိုင်၊ သန်လျင်နှင့် ခရမ်းတွင် ၅ဝ စတုရန်းမိုင်၊ ဒလ၊ တွံတေးတွင် ၃၇ ဒသမ ၅ စတုရန်းမိုင်၊ ရွှေပြည်သာ၊ မှော်ဘီတွင် ၃၉ ဒသမ ၉ စ တုရန်းမိုင်၊ ကော့မှူး၊ ကွမ်းခြံကုန်းတွင် ၂၉ စတုရန်းမိုင် ထပ်မံတိုးချဲ့လိုပါက ထပ်ချဲ့နိုင်သည့် နေရာများအဖြစ် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြေဧက ၇ဝ ခန့်တွင် တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာ စီမံကိန်း၊ မြို့ပြအိမ်ရာ စီမံကိန်း၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းနှင့် မြို့ပြအိမ်ရာ စီမံကိန်း၊ အဆင့်မြင့်ယာဉ်ရပ်နားရန် အဆောက်အအုံ စီမံကိန်းများကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် တင်ဒါခေါ်ယူရေး ကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ တင်ဒါထုတ်ပြန်ချက်အရ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ရွှေပေါက်ကံရှိ မြေဧက ၁ဝ ဒသမ ၉၃ ဧက၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရာဇဓိရာဇ်လမ်းရှိ မြေဧက ၄ဝ ဒသမ ၄၉၃ ဧက၊ ကြည့်မြင်တိုင်ဈေးကြီးလမ်းရှိ ဝ ဒသမ ၃၆၄ ဧက စသည့်မြေနေရာများတွင် မြို့ပြအိမ်ရာ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း မင်းရဲကျော်စွာလမ်းရှိ မြေ ၁၁ ဧကတွင် တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်အတွင်း မဟာဗန္ဓုလမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်ရှိ မြေ ၃ ဒသမ ဝ၆၈ ဧကနှင့် ၄၅ လမ်းရှိ မြေ ၂ ဒသမ ၅၆၁ ဧကတို့တွင် မြို့ပြအိမ်ရာစီမံကိန်းနှင့် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းလမ်းနှင့် ထန်းတပင်လမ်းထောင့်ရှိ မြေ ဝ ဒဿမ ၁ဝ၃ ဧကတွင် အဆင့်မြင့်ယာဉ်ရပ်နားရန် အဆောက်အအုံ စီမံကိန်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အဓိကပြဿနာက ငွေမည်းတွေကို မထိန်းချုပ်တာပဲ။ ငွေမည်းတွေကို မထိန်းချုပ်တော့ အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍထဲ ဝင်လာတယ်။ ငွေမည်းဆိုတာ အခွန်မဆောင်တိုင်းလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ-စက်မှုဇုန်တွေမှာဆို မြေကွက်တွေယူထားပြီး ခုချိန်ထိ အကောင်အထည် မဖော်သေးတဲ့သူတွေ ရှိသေးတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူနိုင်ဖို့လိုတယ်။ စက်မှုဇုန်တွေမှာ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ လောက် စက်ရုံငှားစားသူတွေ ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိ အခွန်မဆောင်ကြတာလဲ ရှိတယ်။ အခွန်ကို စနစ်တကျ ကောက်ခံနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ငွေမည်းတွေ ငွေဖြူလုပ်ဖို့ အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍထဲ ဝင်လာတာတွေကြောင့်လည်း စက်မှုဇုန်မြေဈေးတွေ တခြားမြေဈေးတွေ တက်နေတာပါ” ဟုလည်း လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်မှ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အခုဆို ဈေးကစားတာတွေအပြင် တစ်ဆင့်ခံဝယ်လက်တွေကနေ ပြန်ပြန်ဝယ်နေရတော့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတောင် လန့်ပြေးကုန်ကြတယ်။ ဒါတွေကို အစိုးရက လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီမြေတွေ ဘယ်သူပိုင်လဲဆိုတာ ပြန်စိစစ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဥပမာ လူတစ်ယောက်တည်းက မြေတွေဘယ်လောက် ပိုင်ထားလဲ။ ဘယ်တုန်းက ဝယ်တာလဲ။ အခွန်ဘယ်လောက် ဆောင်ထားလဲ။ ပြန်စစ်လိုက်ရင် ပေါ်လာမှာပါ။ ဘာကြောင့် အဲလိုမလုပ်သေးတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားမရဘူး ဖြစ်နေတယ် . . . . .
“စီမံကိန်းတစ်ခု ရှိပြီဆိုရင် အဲဒီနေရာက မြေဈေးလိုက်တာ သဘာဝပဲ။ နေရာတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ တက်လာတာပဲ။ နောက်တစ်ခုက ဈေးခေါ်တာတွေကြောင့်လည်း ပါတာပေါ့။ တကယ်လို့ ဈေးခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဝယ်တဲ့သူလည်း ဝယ်နိုင်၊ ရောင်းတဲ့သူတွေလည်း အဆင်ပြေနိုင်မယ့် ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ၊ ပျားလည်းစွဲသာ အနေအထားမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်တာပေါ့။ အခုတော့ တချို့နေရာတွေက မတန်တဆဈေးတွေ ဖြစ်နေတယ်” ဟု အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“လိုအပ်ချက်တွေများတော့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတွေ ဖော်တယ်။ အခု လှိုင်သာယာဘက်က တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာတွေကို သိန်း ၁ဝဝ၊ ၁၂ဝ ဈေးနဲ့ ရောင်းမယ်ဆိုတော့ ကြည့်မြင်တိုင်တို့ လှိုင်တို့ဘက်က တိုက်ခန်းဈေးတွေ လိုက်တက်တယ်။ ကွန်ဒိုတွေ ဈေးခေါ်တော့ တိုက်ခန်းဈေးက လိုက်တက်သလိုပေါ့။ အခုက ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ အစိုးရက စီမံကိန်းတွေဆိုပြီး အကောင်အထည်ဖော်တယ်။ အိမ်ရာတွေဆောက်တယ်။ ဆောက်လာတာနဲ့အမျှ ဈေးကလည်း လိုက်တက်နေတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မလဲ။ အစိုးရကပဲ လုပ်နိုင်မှာလေ” ဟု အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ထပ်တိုးချဲ့နိုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာ အချို့က လယ်မြေတွေမပါသလို အချို့လွတ်နေတဲ့ နေရာတွေလည်း ရှိနေတယ်။ ဒါက ချဲ့လို့ရတဲ့ စတုရန်းမိုင်ကိုပဲ ဖော်ပြထားတာ။ အသေးစိတ်က ဒီမြေတွေ ဘယ်သူပိုင်မပိုင် ဆိုတာတော့ မသိပါဘူး။ ချဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလောက်အထိ ချဲ့လို့ရတယ်ဆိုတာ ပြောထားတာ” ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
“အခု တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတွေက ဈေးများတယ်။ သိန်း ၃ဝဝ ဆိုတာ မြို့ထဲမှာ မြင့်ရင်မြင့်ပါစေ။ အလွှာမြင့်မှာ နေလို့ရတယ်။ တစ်ခုရှိတာက မြို့ထဲကတော့ လက်ငင်းပေးဝယ်ရတယ်။ အဲဒီကတော့ Hire Purchase နဲ့ ရောင်းမယ်ပြောတယ်။ ဒါတော့ကွာတာပေါ့။ တွက်ကြည့်တာတော့ ဈေးကြီးနေတာပေါ့။ အခွန်ကတော့ အရင်တုန်းက ၁၅၊ အခု ၃၇ ဆိုတော့ ပိုများတာပေါ့။ သိန်း ၁ဝဝ တန်ဝယ်ရင် ၁၃၅ လောက် ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက အစိုးရဖြတ်တဲ့ဈေးက အပြင်ပေါက်ဈေးထက် နည်းတယ်ဆိုရင်တော့ ၂ဝဝ တန်လောက်ဝယ်ရင် ၂၃၇ လောက်ပေးရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အချို့နေရာတွေ ဘာတွေကျတော့လည်း သိပ်မကွာဘူး။ ကမ္ဘောဇလမ်းတို့ ဘာတို့ဆိုရင်လည်း အပြင်ဈေးနဲ့ မကွာဘူး။ ဒါပေမဲ့ များတာပေါ့။ များတယ်ဆိုတာလည်း နှစ်ပိုင်းပေါ့။ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်း မြင့်လာတဲ့အတွက် ဆောင်ရတဲ့ အခွန်နှုန်းကလည်း မြင့်လာတယ်။ အားလုံးခြုံကြည့်ရင်တော့ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရောင်းအဝယ် အေးတာပေါ့။ လူလတ်တန်းစားတွေတောင် ဝယ်ဖို့က တော်တော်ခဲယဉ်းသွားတယ်။ မလွယ်တော့ဘူး” ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ဆိုသည်။
“လောလောဆယ်က အခွန်နှုန်း ကြီးမြင့်တဲ့အတွက် အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းတွေက မတက်တော့ဘူး ထင်တယ်။ တက်ဖို့လည်း သိပ်တော့မလွယ်ဘူး။ တကယ်လို့ ၂ဝ၁၅ နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေး အလားအလာတွေ ကောင်းလာရင်တော့ တစ်မျိုး၊ စောစောကပြောသလို တန်ဖိုးနည်းတွေချပြီး မြို့ကွက်တွေ ဖော်ပေးမယ်ဆိုရင် ထပ်မတက်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဒီအထဲမှာပဲ အားလုံးက လည်နေမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ။ အပြင်မှာချဲ့ပြီး သွားရေးလာရေး လွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ ကျသွားမှာပေါ့။ အခုတော့ ရှိတဲ့နေရာလေး တစ်ကွက်စာလောက်ကို လုပ်နေရတော့ အခုလိုပဲ တက်နေမှာပေါ့” ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောပြသည်။
“နောက်တစ်ခု မကျရတဲ့ အကြောင်းရင်းက မြို့ပြရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်မှုလည်း ပါတယ်။ အခု တိုက်ခန်းတွေ ဘယ်လောက်ဆောက်ဆောက် လွတ်နေတာမှ မရှိတာ။ တကယ်တမ်း ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ စီးပွားရေး အနေအထားလည်း ကောင်းမယ်။ နိုင်ငံရေး အနေအထားလည်း ကောင်းမယ်ဆိုရင် ကျဖို့တော့ မရှိတော့ဘူး။ လောလောဆယ်မှာတော့ ဈေးနှုန်းက နည်းနည်းတန့်နေတာ” ဟု ၎င်းကဆက်လက် ပြောပြသည်။
“နိုင်ငံတကာ Project တွေ ဝင်လာရင်လည်း ကျမကျဆိုတာက သူတို့ Project ရဲ့ ဈေးနှုန်းပေါ်မူ တည်တာပေါ့။ အဲဒီတော့ အခုကျတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကွန်ဒိုတွေ နည်းနေသေးတယ်။ ထားပါတော့ ကွန်ဒိုက သိန်း ၄ဝဝဝ၊ ၅ဝဝဝ။ နောက်အပြိုင်အဆိုင် များလာလို့ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေက လျှော့ရောင်းရင် တစ်မျိုးပေါ့။ အခုက အဲဒီလို မလုပ်နိုင်ကြဘူးလေ။ အားလုံးက ကွန်ဒိုဆောက်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့ Cost က အခုအသစ်တွေဆိုရင် One Square Feet ဆိုရင် နှစ်သိန်းပေးရမယ်ဆိုတော့ လျှော့မရောင်းနိုင်ကြဘူး။ အဲဒီလျော့အောင် ဆောက်နိုင်ဖို့လည်း အခက်အခဲရှိတယ်။ မြေဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုတော့ မလွယ်ဘူး။ များသောအားဖြင့် မြေဈေးနှုန်းတက်တဲ့ အခါမှာ အိမ်ရှင်ကို ပြန်ပြီးတော့မှ အခန်းပေးအခန်းယူ နည်းသွားကြတာကိုး။ ကိုယ်ပိုင်ဆောက်တာ နည်းတယ်။ မြေဈေးနှုန်းမြင့်တော့ အခန်းဈေးနှုန်းတွေလည်း လိုက်မြင့်တာပေါ့” ဟု အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်အလိုက် တစ်ပေပတ်လည် မြေဈေးနှုန်းများကို ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) မှ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက် အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ် ဈေးကွက်တွင် အရောင်းအဝယ် အေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ယခုသတ်မှတ်လိုက်သည့် အိမ်ခြံမြေ ဈေးနှုန်းများမှာ အချက်အချာကျသည့် နေရာများတွင် ယခင်ပေါက်ဈေးထက် ပိုမိုနည်းပါးလျက်ရှိကြောင်း အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်များက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
ယခုကဲ့သို့ သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းကို အစိုးရအနေနှင့် အခွန်မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်စေလိုခြင်း (သို့မဟုတ်) အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်း ကျဆင်းရန် ထိန်းချုပ်လိုခြင်း ဆိုသည်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိလာပြီး ရည်ရွယ်ချက် တိကျမှန်ကန်ရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များက သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
“အစိုးရအနေနဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်း ကျဆင်းချင်တယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့မှာ လူဦးရေ တိုးပွားလာတာနဲ့အမျှ အိမ်ရာလိုအပ်ချက်တော့ ရှိမှာပဲ။ အဲဒီမှာ ရောင်းလိုအား၊ ဝယ်လိုအားမမျှတော့ ဈေးတွေတက်ကုန်တယ်” ဟု Estate Myanmar အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှ ဦးဟိန်းမိုးမြင့်လွင်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်အလိုက် တစ်ပေပတ်လည် မြေဈေးနှုန်းများကို သတ်မှတ်ရခြင်းမှာ မြေနေရာတန်ဖိုးအလိုက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို အပြည့်အဝ ဆောင်စေရန်နှင့် အခွန်တိမ်းရှောင်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယခုကဲ့သို့ သတ်မှတ်ပြီးပါက ကျန်ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများတွင်လည်း သတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမောင်မောင်သိမ်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ပေပတ်လည် မြေဈေးနှုန်းများကို ကာလပေါက်ဈေးအလိုက် သတ်မှတ်ပေးထားသော်လည်း ယင်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သူ မရှိဘဲ ကြိုက်ရောင်း၊ ကြိုက်ဝယ် ဈေးများဖြင့်သာ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်မှုများ ရှိလာကြောင်းလည်း သိရသည်။ လက်ရှိသတ်မှတ်ထားသော အိမ်ခြံမြေ အရောင်းဝယ်များအတွက် ဝင်ငွေခွန် ရာခိုင်နှုန်း ၃ဝ နှင့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၇ ရာခိုင်နှုန်း စုစုပေါင်း ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင်နေရကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ဝယ်ယူသူများမှာ အခွန်ကို အတိအကျ ပေးဆောင်ရမည် စိုးသောကြောင့် အမည်ပေါက် မပြောင်းဘဲ နားလည်မှုဖြင့် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နေကြကြောင်း သိရသည်။
“ရန်ကုန်မြို့မှာ အိမ်ခြံမြေဈေးတွေ ကြီးမြင့်နေတယ်ဆိုတာ ဒီအိမ်ခြံမြေကို ဘယ်သူတွေ ပိုင်တယ်ဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ အခုဆို ဈေးကစားတာတွေအပြင် တစ်ဆင့်ခံဝယ်လက်တွေကနေ ပြန်ပြန်ဝယ်နေရတော့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတောင် လန့်ပြေးကုန်ကြတယ်။ ဒါတွေကို အစိုးရက လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီမြေတွေ ဘယ်သူပိုင်လဲဆိုတာ ပြန်စိစစ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဥပမာ လူတစ်ယောက်တည်းက မြေတွေဘယ်လောက် ပိုင်ထားလဲ။ ဘယ်တုန်းက ဝယ်တာလဲ။ အခွန်ဘယ်လောက် ဆောင်ထားလဲ။ ပြန်စစ်လိုက်ရင် ပေါ်လာမှာပါ။ ဘာကြောင့် အဲလိုမလုပ်သေးတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားမရဘူး ဖြစ်နေတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။